पूर्व महिला लडाकूको पीडाः ज्यानकै बाजी थापेर युद्धमा होमिए, अहिले सडकमा ल्याएर छोडिदिए « MNTVONLINE.COM
पूर्व महिला लडाकूको पीडाः ज्यानकै बाजी थापेर युद्धमा होमिए, अहिले सडकमा ल्याएर छोडिदिए
चैत १, काठमाडौँ । कक्षा ७ मा पढ्दै थिइन् । भर्खरै १२ वर्षकी थिइन् । किशोरावस्थाले छोइसकेको थियो । बालापनको सौख पूरा गरेर किशोरावस्थाको यौवन चढिसकेको थियो । स्कुलमा पढ्नुभन्दा पनि अन्य क्रियाकलापमा बढी ध्यान जान्थ्यो । अर्कोतिर तत्कालीन समय पनि त्यस्तै थियो ।
माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेको अवस्था थियो । माओवादीले आफूप्रति लोभ्याउन विशेषगरी विद्यालय उमेरका किशोरकिशोरीलाई निसानामा राख्ने गर्थे । त्यही निसानामा परिन् काभ्रे दोलालघाटकी शोभा पराजुली । र, १२ वर्षकै उमेरमा कापीकलम बोक्ने हातमा एलएमजी हतियार ।
‘त्यो बेला त माओवादी के हो ? जनयुद्ध के हो ? भन्ने सम्म थाहा थिइन् । रमाइलोका लागि माओवादीमा लागियो,’ शोभाले भनिन् ।
२०६० सालमा उनी पहिलोपटक माओवादीमा लागेकी थिइन् । युद्ध लड्नका लागि कसरी हतियार चलाउने ? दुश्मनको अगाडी अगाडी कसरी प्रस्तुत हुने ? जस्ता विषयमा उनलाई १९ दिन मात्र तालिम दिइयो । त्यसपछि उनी जनमुक्ति सेनाको पूर्णकालीन लडाकू भइन् ।
२०६३ सालमा माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो । उनले बल्ल मुक्तिको श्वास फेर्न पाइन् । र, अब क्रान्ति पूरा भएको भान भयो । तर, अहिले आएर उनलाई युद्ध किन लडेको होला भनेर पछुतो हुन्छ ।
दिनप्रतिदिन देशको अवस्था बिग्रिँदै गर्दा उनलाई पीडाले छाती चिरिन्छ । जुन उद्देश्यका लागि युद्ध लडेका थिए, आज त्यो सपना साकार हुन सकिरहेको छैन । विगतको जस्तै ठूलाठालु र पावरवालाकै अहिले पनि हालीमुहाली छ । आफ्नै नेतृत्वले बेवास्ता गर्दा र नचिन्दा युद्धमा होमिनु गलत थियो कि भन्दै यतिबेला उनी आफैंले आफैंलाई प्रश्न गर्छिन् ।
‘खाली आश्वासन मात्र दिने । काम केही नगर्ने भएपछि भेट्न किन जानु पर्‍यो ?’ शोभाले प्रश्न गरिन्, ‘हामी ज्यानको बाजी थापेर युद्धमा होमियौं । तर, उहाँहरूले म लगायत चार हजार आठ जनालाई रोडमा ल्याएर छोड्नुभयो । अहिले आएर अयोग्य बाल लडाकू भनेर विशेषण दिइयो । १२ वर्षको उमेरमा बन्दुक समाउन कसलाई रहर हुन्छ र ?’